Vaovao - Fampiharana indostrialy sy fanasokajiana ireo mpankafy fampangatsiahana indostrialy
Mpiambina ny plastika
Fitaovana ao an-trano
Fitaovana fitsaboana sy fahadiovana
Fitaovana mandeha amin'ny fiara
Fampiharana indostrialy sy fanasokajiana ireo mpankafy fampangatsiahana indostrialy
Marihina fa tsy miresaka momba ny mpankafy indostrialy momba ny vokatra vita (toy ny fitaovana fampangatsiahana sy rivotra ho an'ny toerana avo toa ny zavamaniry indostrialy, fitehirizana lozisialy, efitrano fiandrasana, efitrano fampirantiana, kianja, fivarotana lehibe, làlambe, tonelina sns), Ary an'ny an'ny fampiharana ny fantsom-panafana hafanana amin'ny vokatra indostrialy vokatra-fanala indostrialy.
Ireo singa indostrialy, avy eo dia midika fa ny vokatra toy izany dia tsy hamidy mivantana amin'ny mpanjifa, ary izy ireo dia singa ampiharina amin'ny fanaparitahana hafanana na ampahany amin'ny singa fampiharana (satria ankoatry ny fivoahan'ny rivotra sy ny famafana ny hafanana dia misy ihany koa ny famafana ny hafanana ary ny famafana ny hafanana mampihena ny rano . Ary fampiharana hafa fanaparitahana hafanana).
Ireo mpankafy fampangatsiahana indostrialy dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana marobe, manomboka amin'ny fitaovana aerospace ka hatramin'ny borosy nify elektrika. Ny singa mangatsiaka toy izany dia azo ampiasaina.
Ny kojakoja ao an-tokantrano sy ny fitaovana elektrika ao amin'ny birao dia vokatra indostrialy miaraka amin'ny fangatahana lehibe indrindra ho an'ny mpiorina mpankafy fantsona indostrialy, fa izy ireo koa dia manana ny takiana avo indrindra amin'ny fahaiza-mamoaka vokatra marobe. Na izany aza, satria ny vokatra toy izany dia vokatra vita amina indostrialy kilasy sivily, ny fepetra takiana amin'ny fanaparitahana hafanana an'ireo vokatra dia tsy avo. Mifaninana tanteraka ny tsenan'ny vokatra. Satria ny vokatra toy izany dia tsy manana takiana avo lenta amin'ny fepetra miasa mitohy, ny fiparitahana ny hafanana ary ny fiparitahana ny hafanana eo amin'ny tontolon'ny vokatra, dia tsy misy fampisehoana be loatra amin'ny sokajy vokatra misy ny vavahadin-tseraseran'ny tambajotran'ny mpankafy indostrialy.
Ny sokajin'ireo singa mpankafy fantsona indostrialy voatanisa ao amin'ny Industrial Fan Network dia ampiasaina amin'ny indostria maro toy ny rivotra, ny vata fampangatsiahana, ny fanamainana, ny fiara, ny teknolojia fiara, ny herinaratra elektronika, ny herinaratra UPS, ny jiro LED, ny fitaovana mekanika, ny fitaovam-pifandraisana, ny fitaovana fitsaboana. , fitaovana, sns., dia ampahany manan-danja amin'ny fanaparitahana ny hafanana sy ny singa mangatsiaka amin'ny vokatra vita indostrialy.
Ny indostrian'ny fihenan-tsakafo indostrialy dia manasongadina ny fahamarinan-toeran'ny vokatra, toy ny hafainganan'ny vokatra, ny habetsaky ny rivotra, ny tsindry static, ny tabataba, ny hamandoana ary ny fanoherana ny vovoka, ny naoty tsy tantera-drano, ny fitaovam-pitaterana, ny masontsivana fanamarinana manokana ho an'ny indostria, samy zava-dehibe izy roa andinin-tsoratra ho an'ny fifantenana ireo mpankafy mangatsiaka ho an'ny vokatra indostrialy.
Ireo mpankafy fampangatsiahana indostrialy dia sokajiana araka ny fitarihan'ny airflow, ary azo zaraina ho sokajy 6: ny axial flow, ny mikorontana, ny centrifugal flow, ny cross flow (cross flow), ny blower, ary ny mpankafy (tsy misy rafitra) mpankafy. Ireto ny toetra teknikan'izy ireo:
Ny mampiavaka azy: ny tahan'ny mikoriana avo, ny tsindry entin'ny rivotra
Ny lelan'ny mpankafy axial dia manosika ny rivotra hikoriana amin'ny lalana mitovy amin'ilay hazo. Ny impeller an'ny mpankafy axial dia mitovy amin'ny propeller. Rehefa miasa izy dia ny ankamaroan'ny fikorianan'ny rivotra dia mifanitsy amin'ny hazo, amin'ny teny hafa manaraka ny axis. Rehefa ny rivotra miditra miditra dia rivotra maimaim-poana miaraka amin'ny tsindry aotra tsy mihetsika, ny mpankafy mikoriana axial dia manana fanjifana herinaratra ambany indrindra. Rehefa miasa dia hitombo ny fanjifana herinaratra rehefa miakatra ny tsindry miverina amin'ny rivotra. Ireo mpankafy axial dia matetika apetraka ao amin'ny kabinetran'ny fitaovana elektrika, ary indraindray tafiditra ao anaty motera. Satria ny mpankafy axial dia manana rafitra matevina, afaka mamonjy habaka betsaka izy io, ary mora ny mametraka azy ary be mpampiasa.
Ny mampiavaka azy: ny tahan'ny mikoriana voafetra, ny tsindry mahery
Ireo mpankafy centrifugal, antsoina koa hoe mpankafy sentrifugal, rehefa miasa, ny lelany dia manosika ny rivotra hitanjozotra mankamin'ny lalana miharo amin'ny zoro (izany hoe radial), ny fidiran'ny rivotra dia manaraka ny lalan'ny axis, ary ny fivoahan'ny rivotra dia mifandraika amin'ilay lalan'ny axis. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny vokatra mangatsiaka dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampiasana mpankafy axial. Na izany aza, indraindray raha mila ahodina 90 degre ny fikorianan'ny rivotra na rehefa ilaina ny tsindry rivotra lehibe kokoa dia tsy maintsy ampiasaina ny mpankafy afovoany. Raha ny tena marina dia mpankafy afovoany ihany koa ireo mpankafy.
Endri-javatra: fiovan'ny rivotra kely, fahombiazan'ny volumetric avo, androm-piainana maharitra, ary fahanginana tsara
Ny fitsipiky ny fiasan'ny blower dia ny fizotran'ny famatrarana rivotra matetika atao eo ambanin'ny asan'ny hery afovoany amin'ny alàlan'ny impeller miasa (na dingana maromaro). Ny mpamily dia manana rotor mihodina haingana. Ny lelany amin'ny rotor dia mitondra ny rivotra hifindra amin'ny hafainganam-pandeha. Ny hery centrifugal dia miteraka ny fikorianan'ny rivotra ao anaty casing miendrika mahery vaika manaraka ny fanetsehana mankany amin'ny outlet fan. Ny onjam-peo haingam-pandeha dia misy tsindry azon'ny rivotra. Miditra ny rivotra madio ary mameno avy eo afovoan'ny casing.
Ny mampiavaka azy: ambany ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra, ambany ny tsindry ataon'ny rivotra
Ny fanamoriana mikoriana dia antsoina koa hoe mpantsaka mikoriana, afaka mamokatra faritra midadasika amin'ny fikorianan'ny rivotra izy, matetika ampiasaina hampangatsiaka ny velaran'ny fitaovana lehibe. Ny fidirana sy ny fivoahan'ny mpankafy dia mifandraika amin'ny axis. Ny mpankafy mikoriana miampita dia mampiasa mpanentana mpankafy miova endrika toa barika hiasa. Somary lehibe ny savaivon'ny valan-tsofina miendrika barika. Noho ny savaivony lehibe dia afaka mampiasa hafainganam-pandeha somary ambany izy amin'ny fiantohana ny fivezivezin'ny rivotra amin'ny ankapobeny. , Ahena ny tabataba vokatry ny fandidiana haingam-pandeha.
Mpankafy bracket (tsy misy rafitra)
Ny mampiavaka azy: rivotra ambany, ambany hafainganam-pandeha, faritra midadasika
Ny mpankafy bracket dia ampiasaina amin'ny famafana ny tabilao PCB. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fidinan'ny hafanana ao amin'ny tabilao misy ny rafitra hiteraka faritra lehibe amin'ny fikorianan'ny rivotra. Matetika izy io dia ampiasaina mba hampangatsiahana ny faritra midadasika amin'ny fitaovana hanaparitahana ny hafanana.
Ny haben'ny rivotra an'ny mpankafy tsy misy rafitra dia nampitomboina, ary ny toeran'ny mpankafy dia mandray endrika mivelatra mba hampitomboana ny fahafahan'ny rivotra miditra. Mandritra izany fotoana izany, ny mpankafy tsy misy rafitra dia misy vokany moana kokoa
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina - Sitemap
Guard Fan Plastika, Hvac Fan Puller, 12cm Ac Axial Fan, Metal Fan Guard, Metal Grill Fan 80mm Guard, 172mm Ac Axial Fan,